ပုံတုံးတုံး အဝတ်အစားအဟောင်းတွေကို အလန်းစားဒီဇိုင်း ဖန်တီးကြည့်ရအောင် - Lifestyle Myanmar
ပုံတုံးတုံး အဝတ်အစားအဟောင်းတွေကို အလန်းစားဒီဇိုင်း ဖန်တီးကြည့်ရအောင်
ပျိုမေတို့မှာ မဝတ်ဖြစ်တော့ဘဲ ချောင်ထိုးထားတဲ့ အဝတ်အစားအဟောင်းတွေရှိရင် ဒီလိုဒီဇိုင်းအလန်းလေးတွေ ဖန်တီးလို့ရတယ်နော်။
သင့်မှာ ဆွယ်တာအင်္ကျီလေးရှိရင် ကတ္တီပါဖဲကြိုးလေးကိုသုံးပြီး အချိန်၁၅မိနစ်လောက်နဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဒီဇိုင်းလေးဖန်တီးလို့ရပါတယ်။
၂။ တောက်ပတဲ့ ဖဲကြိုး
သင့်ရဲ့သာမန်တီရှပ်ပေါ်ကို ဖဲကြိုးအရောင်တောက်တောက်လေးတွေ ကပ်မယ်ဆိုရင် သင့်အင်္ကျီကို ထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်စေမှာပါ။
၃။ ဂါဝန်တစ်ထည်ကို အင်္ကျီအဖြစ်ပြောင်းမယ်
မိန်းကလေးတိုင်းမှာ မဝတ်ဖြစ်တော့တဲ့ ဂါဝန်တစ်ထည်တော့ ရှိကြပါတယ်။ ဂါဝန်တစ်ထည်ကို အလွန်လှပတဲ့ အင်္ကျီအဖြစ် ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။
သင့်ရဲ့ဂျာကင်ကို ဝတ်ရတာ ငြီးငွေ့နေပြီလား? အရောင်တောက်တောက်တစ်ချို့ထည့်ချင်သလား? ဒီအိုင်ဒီယာလေးက သင့်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာကင်တစ်ထည်၊ ပန်းပွားတစ်ချို့နဲ့ နည်းနည်းစိတ်ရှည်ဖို့လိုပါတယ်။
၅။ နောက်ကျောကို Upgrad လုပ်မယ်
သင့်ရဲ့ဆွယ်တာတစ်ထည်ကို ပိုပြီးကြည့်ကောင်းစေဖို့ အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်မယ့်နည်းပါ။ ကျောဘက်က တစ်ချို့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုညှပ်ပြီးပြန်ချုပ်ပါတယ်။
၆။ ဂျင်းဂျာကင်လေးတွေကို တန်ဆာဆင်မယ်
အဝတ်အစားအဟောင်းတွေကို အလှဆင်ရတာ စိတ်ရှည်ပြီး နှစ်သက်လျှင် သင့်ဂျင်းဂျာကင်ဟောင်းကို ဒီလိုတန်ဆာဆင်လို့ရပါတယ်။
၇။တီရှပ်တစ်ထည်ကို ဘလောက်အင်္ကျီအဖြစ် ပြောင်းလဲမယ်
သင့်ရဲ့တီရှပ်ဟောင်းတစ်ထည်ကို ခေတ်မီအင်္ကျီတစ်ထည်အဖြစ် အလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။အထူးကျွမ်းကျင်မှုတော့ လိုအပ်ပါတယ်။
၈။ ဆွယ်တာဟောင်တစ်ထည်ကို လည်စည်းပုဝါအဖြစ် ဖန်တီးမယ်
သင့်မှာ ဆွယ်တာအဟောင်းရှိရင် မစွန့်ပစ်ပါနဲ့ ။ဆောင်းတွင်းမှာ သင့်ကို နွေးထွေးစေမယ့် လည်စည်းပုဝါအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
၉။ စကတ်ကိုအတွန့်လေးတွေနဲ့ အလှဆင်မယ်
သင့်မှာ ရှိတဲ့ စကတ်အဟောင်းက အရမ်းရှည်နေလို့ မဝတ်ချင်ဘူးဆိုရင် ဒီဇိုင်းလန်းလန်း အတိုလေးကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ စကတ်ကို ကိုယ်လိုသလောက်ဖြတ်ပြီး ဖြတ်စနဲ့ စကတ်မှာ အတွန့်လေးတွေ အလှဆင်နိုင်ပါတယ်။
၁၀။ သိုးမွေးပန်းဖွားလေးတွေနဲ့ အလှဆင်မယ်
သင့်ဂျင်းဘောင်းဘီအဟောင်းကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်ဖို့ သိုးမွေးပန်းဖွားလေးတွေနဲ့ ချုပ်ရိုးတစ်လျှောက် လိုက်ချုပ်ပေးပါ။
ရိုးရိုးတီရှပ်တစ်ထည်ကို ပုခုံးပျောက်ရှပ်အင်္ကျီပုံစံပြောင်းဖို့ တီရှပ်အင်္ကျီကော်လာကို ညှပ်ထုတ်ပါ။ အနားစွန်းတွေကို ချုပ်ပါ။ သားရေကြိုး/မျော့ကြိုးထည့်ချုပ်ပြီး ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ချုပ်နည်းလေးကို videoထဲမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
5 ways to turn old clothes into something new.? bit.ly/2KwfEDy
Gepostet von 5-Minute Crafts am Mittwoch, 4. Juli 2018
၁၂။ ဦးထုပ်လေးကို အလှဆင်မယ်
ဆောင်းတွင်းရောက်တော့မှာဆိုတော့ သင့်ရဲ့သိုးမွေးဦးထုပ်အဟောင်းလေးတွေကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်ပြီး စတိုင်ထုတ်လို့ရပါတယ်။ ဦးထုပ်ပေါ်မှာ ရယ်ဒီမိတ်ပန်းကပ်လေးတွေ တပ်လို့ရသလို၊ စီးကွင့်တွေ၊ ပုတီးစေ့တွေနဲ့ အလှဆင်နိုင်ပါတယ်။
ဆောင်းတွင်းမှာ နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ စတိုင်ကျနေစေဖို့ ဆွယ်တာအသစ်ဝယ်ဖို့မလိုပါဘူး။ ဆွယ်တာအဟောင်းတစ်ထည်ကိုရှာပြီး အင်္ကျီလက်ပေါ်မှာ သိုးမွှေးပန်းပွားလုံးလေးတွေ အလှဆင်ပေးယုံပါပဲ။
၁၄။ ဂျင်းဘောင်းဘီကို စကတ်ပုံစံပြောင်းမယ်
၁၅။ အားကစားဖိနပ်ကို ပန်းထိုးပြီးစီးမယ်
ပန်းတွေနဲ့အလှဆင်ထားတဲ့ ဖိနပ်ကို ယနေ့ခေတ်မှာ လူကြိုက်များကြပါတယ်။ ဒီတော့ သင့်မှာ Sneakers ဖိနပ်အဟောင်းတစ်ရံရှိရင် ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းလေးတွေ ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။
၁၆။ အင်္ကျီတံတောင်ဆစ်မှာ အသဲပုံသိုးမွှေးလေးထိုးမယ်
တကယ်လို့ သင့်ဆွယ်တာအကျီက တံတောင်ဆစ်မှာ အပေါက်ဖြစ်နေရင် မလွှင့်ပစ်ပါနဲ့။ သိုးမွှေးကြိုးတွေနဲ့ ပြင်ဆင်ဖာထေးပြီး အလှဆင်နိုင်ပါတယ်။
ပုံတုံးတုံး အဝတျအစားအဟောငျးတှကေို အလနျးစားဒီဇိုငျး ဖနျတီးကွညျ့ရအောငျ
ပြိုမတေို့မှာ မဝတျဖွဈတော့ဘဲ ခြောငျထိုးထားတဲ့ အဝတျအစားအဟောငျးတှရှေိရငျ ဒီလိုဒီဇိုငျးအလနျးလေးတှေ ဖနျတီးလို့ရတယျနျော။
သငျ့မှာ ဆှယျတာအင်ျကြီလေးရှိရငျ ကတ်တီပါဖဲကွိုးလေးကိုသုံးပွီး အခြိနျ၁၅မိနဈလောကျနဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ဒီဇိုငျးလေးဖနျတီးလို့ရပါတယျ။
၂။ တောကျပတဲ့ ဖဲကွိုး
သငျ့ရဲ့သာမနျတီရှပျပျေါကို ဖဲကွိုးအရောငျတောကျတောကျလေးတှေ ကပျမယျဆိုရငျ သငျ့အင်ျကြီကို ထူးထူးခွားခွားလေးဖွဈစမှောပါ။
၃။ ဂါဝနျတဈထညျကို အင်ျကြီအဖွဈပွောငျးမယျ
မိနျးကလေးတိုငျးမှာ မဝတျဖွဈတော့တဲ့ ဂါဝနျတဈထညျတော့ ရှိကွပါတယျ။ ဂါဝနျတဈထညျကို အလှနျလှပတဲ့ အင်ျကြီအဖွဈ ဖနျတီးလို့ရပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ဂြာကငျကို ဝတျရတာ ငွီးငှနေ့ပွေီလား? အရောငျတောကျတောကျတဈခြို့ထညျ့ခငျြသလား? ဒီအိုငျဒီယာလေးက သငျ့အတှကျဖွဈပါတယျ။ ဂြာကငျတဈထညျ၊ ပနျးပှားတဈခြို့နဲ့ နညျးနညျးစိတျရှညျဖို့လိုပါတယျ။
၅။ နောကျကြောကို Upgrad လုပျမယျ
သငျ့ရဲ့ဆှယျတာတဈထညျကို ပိုပွီးကွညျ့ကောငျးစဖေို့ အလှယျတကူပွုလုပျနိုငျမယျ့နညျးပါ။ ကြောဘကျက တဈခြို့အစိတျအပိုငျးတှကေိုညှပျပွီးပွနျခြုပျပါတယျ။
၆။ ဂငျြးဂြာကငျလေးတှကေို တနျဆာဆငျမယျ
အဝတျအစားအဟောငျးတှကေို အလှဆငျရတာ စိတျရှညျပွီး နှဈသကျလြှငျ သငျ့ဂငျြးဂြာကငျဟောငျးကို ဒီလိုတနျဆာဆငျလို့ရပါတယျ။
၇။တီရှပျတဈထညျကို ဘလောကျအင်ျကြီအဖွဈ ပွောငျးလဲမယျ
သငျ့ရဲ့တီရှပျဟောငျးတဈထညျကို ခတျေမီအင်ျကြီတဈထညျအဖွဈ အလှယျတကူပွောငျးလဲနိုငျပါတယျ။အထူးကြှမျးကငျြမှုတော့ လိုအပျပါတယျ။
၈။ ဆှယျတာဟောငျတဈထညျကို လညျစညျးပုဝါအဖွဈ ဖနျတီးမယျ
သငျ့မှာ ဆှယျတာအဟောငျးရှိရငျ မစှနျ့ပဈပါနဲ့ ။ဆောငျးတှငျးမှာ သငျ့ကို နှေးထှေးစမေယျ့ လညျစညျးပုဝါအဖွဈ ပွောငျးလဲနိုငျပါတယျ။
၉။ စကတျကိုအတှနျ့လေးတှနေဲ့ အလှဆငျမယျ
သငျ့မှာ ရှိတဲ့ စကတျအဟောငျးက အရမျးရှညျနလေို့ မဝတျခငျြဘူးဆိုရငျ ဒီဇိုငျးလနျးလနျး အတိုလေးကို ပွောငျးလဲနိုငျပါတယျ။ စကတျကို ကိုယျလိုသလောကျဖွတျပွီး ဖွတျစနဲ့ စကတျမှာ အတှနျ့လေးတှေ အလှဆငျနိုငျပါတယျ။
၁၀။ သိုးမှေးပနျးဖှားလေးတှနေဲ့ အလှဆငျမယျ
သငျ့ဂငျြးဘောငျးဘီအဟောငျးကို ပွနျလညျဆနျးသဈဖို့ သိုးမှေးပနျးဖှားလေးတှနေဲ့ ခြုပျရိုးတဈလြှောကျ လိုကျခြုပျပေးပါ။
ရိုးရိုးတီရှပျတဈထညျကို ပုခုံးပြောကျရှပျအင်ျကြီပုံစံပွောငျးဖို့ တီရှပျအကငြ်ျီကျောလာကို ညှပျထုတျပါ။ အနားစှနျးတှကေို ခြုပျပါ။ သားရကွေိုး/မြော့ကွိုးထညျ့ခြုပျပွီး ဝတျဆငျနိုငျပါတယျ။ ခြုပျနညျးလေးကို videoထဲမှာကွညျ့နိုငျပါတယျ။
၁၂။ ဦးထုပျလေးကို အလှဆငျမယျ
ဆောငျးတှငျးရောကျတော့မှာဆိုတော့ သငျ့ရဲ့သိုးမှေးဦးထုပျအဟောငျးလေးတှကေို ပွနျလညျဆနျးသဈပွီး စတိုငျထုတျလို့ရပါတယျ။ ဦးထုပျပျေါမှာ ရယျဒီမိတျပနျးကပျလေးတှေ တပျလို့ရသလို၊ စီးကှငျ့တှေ၊ ပုတီးစတှေ့နေဲ့ အလှဆငျနိုငျပါတယျ။
ဆောငျးတှငျးမှာ နှေးနှေးထှေးထှေးနဲ့ စတိုငျကနြစေဖေို့ ဆှယျတာအသဈဝယျဖို့မလိုပါဘူး။ ဆှယျတာအဟောငျးတဈထညျကိုရှာပွီး အကငြ်ျီလကျပျေါမှာ သိုးမှေးပနျးပှားလုံးလေးတှေ အလှဆငျပေးယုံပါပဲ။
၁၄။ ဂငျြးဘောငျးဘီကို စကတျပုံစံပွောငျးမယျ
၁၅။ အားကစားဖိနပျကို ပနျးထိုးပွီးစီးမယျ
ပနျးတှနေဲ့အလှဆငျထားတဲ့ ဖိနပျကို ယနခေ့တျေမှာ လူကွိုကျမြားကွပါတယျ။ ဒီတော့ သငျ့မှာ Sneakers ဖိနပျအဟောငျးတဈရံရှိရငျ ကိုယျ့စိတျကွိုကျဒီဇိုငျးလေးတှေ ဖနျတီးလို့ရပါတယျ။
၁၆။ အကငြ်ျီတံတောငျဆဈမှာ အသဲပုံသိုးမှေးလေးထိုးမယျ
တကယျလို့ သငျ့ဆှယျတာအကြီက တံတောငျဆဈမှာ အပေါကျဖွဈနရေငျ မလှငျ့ပဈပါနဲ့။ သိုးမှေးကွိုးတှနေဲ့ ပွငျဆငျဖာထေးပွီး အလှဆငျနိုငျပါတယျ။